Hidio ny terminal anao ary tazomy izay ataonao amin'ny vlock | Avy amin'ny Linux
Hidio ny terminal anao ary tazomy izay ataonao amin'ny vlock
Nitranga tamiko matetika ny fotoana niasako tao amin'ny terminal an'ny solosainako ary tamin'izany fotoana izany dia nangataka ahy tany amin'ny birao hafa izy ireo, na nanana 'zavatra' natao tao amin'ny terminal aho ary ho an'ny fanamorana sy filàna dia tsy maintsy avelako ny namako iray hampiasa azy io ho an'ny vitsivitsy. minitra ny solosaina findainy, amin'ny tranga toa an'ity ... Ahoana no hiarovako ny zavatra ataoko ao amin'ny terminal nefa tsy mila manakana tanteraka ny fotoanan'ny mpampiasa?
Soa ihany fa misy ilay fonosana: vlock
Apetraho amin'ny rafitrao ity fonosana ity ary ampitao amin'ny terminal fotsiny izy (vlock), ho hitan'izy ireo fa voasakana / voaro ny terminal ary mandra-pahatongavany hanindry ny [Enter] sy hiditra ny teny miafina, dia hitohy izany 😉
Raha te hahita ilay lozisialy miresaka fanandramana tsy nahomby ianao, fanandramana fidirana mahomby ary maro hafa, mila manao saka fotsiny ianao amin'ilay rakitra /var/log/auth.log mandalo azy ho masontsivana grep "Vlock"
Tsotra kely ity, eny, saingy efa nahasoa ahy ... Manantena anao aho koa 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Hidio ny terminal anao ary tazomy izay ataonao amin'ny vlock
Ny programa +1 dia tena mahaliana, na dia tsy hitako aza hoe ilaina amin'ny toe-javatra toy ilay notononinao io, satria raha afaka manatanteraka baiko manan-danja ianao dia mila ny root pass ary raha misy izany dia azonao atao xq miaraka amin'i ctrl + alt + f1 na f2 sns manokatra tty izy ireo ary miditra ho faka ary manao fahasimbana mitovy.
Ho fanampin'izay, ny baiko azo idirana avy amin'ny terminal ho toy ny mpampiasa mahazatra, amin'ny tranga marobe dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny programa izy ireo. Ho fanampin'ny hoe mamaky, mandika, mamafa ireo rakitra, ary azonao atao aza ny mametraka rohy mankany amin'ny programa mpitsikilo miafina ao anaty trano $ ary hamoha isaky ny manomboka ny fivoriana ianao, anisan'ireo zavatra maro.
Toa ahy fa ny programa dia natao indrindra, satria rehefa maro ny pcs notantanana ary ny mpampiasa mampiasa azy ireo dia tsy te-hiditra amin'ny terminal ampidirina amin'ny fihenan'ny isan'ny tty terminal, raha tsy hoe manakana azy ireo koa ity programa ity .
Mitovy hevitra aminao aho. Tsy manakana ny fisokafan'ny terminal hafa izany. Ary raha tianao ho hitanao izay nataon'ny hafa taloha dia hitako ny fisie ~ / .bash_history (na mitovy amin'ny miankina amin'ny distro)
Na dia fonosana mahaliana aza izany dia heveriko fa tsara kokoa ny manakana ny fivoriana.
woqer dia hoy izy:
Toa mahasoa izy io, na dia mbola hitako tsara aza ny manakana ny fotoana ... raha izay atahoranao ho very ny session bash anao dia manoro hevitra aho ny hampiasa ny efijery GNU Raha miditra amin'ny arguments «écran -D -R» ianao dia hiditra amin'ilay session mitovy foana, hivoaha amin'ny hitsin-dàlana «Ctrl + a» ary «d» (izany hoe Ctrl + a aloha no ataonao ary avy eo ianao tsindrio «d»), Ka hoy ianao amin'ilay programa mba hitazomana ny fivoriana hisokatra aoriana.
Mamaly an'i woqer
Misaotra amin'ny tendrony!
PS: ity dia ho an'ny mpampiasa izay manandrana mampiasa ny terminal misy anay fotsiny, sa tsy izany? .. Mety ho azo atao ihany koa ny manakana ny akorany rehefa mamorona mpampiasa na manova ny efa misy!
Na izany aza, ankasitrahana ianao!
Andao hojerentsika, heverina fa ny manokatra terminal hafa dia tsy maintsy mampiditra solonanarana sy teny miafina ianao.
Ny tsy itovizany dia eo ambanin'ny tontolon'ny sary isika ary manatanteraka xterm na hafa.
Aleoko miloka bebe kokoa amin'ny rindranasa manakana ny solosaina iray manontolo, ao anatin'izany ny X.
Hesoriko ny kitendry ary ento miaraka amiko 😛
Mety hahasoa izy io rehefa tsy mampiasa ny tontolon'ny sary ary ao anaty lalao filalaovana chess na bitsika, avy eo tsy manelingelina anao izy ireo ary manohy ny zavatrao ianao.
Tsy afaka Alejandro ianao, tadidiko fa nisy ny mpanara-maso phospor maintso ary tsy azo leferina izy ireo, notampohan'izy ireo ny masonao, izany no nahatonga azy ireo nanova azy ireo ho amber ary avy eo lasa monochromatic.
Ary ambonin'izany dia ampidirinao ao ambadika feno litera izany, diso ianao! Hahaha !!! 😀
Raha ny momba ny vlock dia jereo fa misy fork mahafinaritra antsoina hoe vlock-matrix izay mazava ho azy mampiseho anao ny cascade of litera rehefa manidy ny efijery izy.
Ity cascade ity dia azo alamina mifanaraka amin'ny endri-tsoratra tianao hipoitra, ny loko sns. Ny lafy tsarany sy ny antony tsy ampiasako azy dia toa ny effet "matrix" dia mandany processeur loatra ho an'ny tsiroko.
Zavatra iray hafa: ny vlock dia tena ilaina tokoa rehefa miasa an-tsehatra isika satria afaka mamela dingana mihazakazaka any aoriana ary manakana ny terminal sy ny fidirana amin'ny fitsaharan'ny TERMINALS hafa, tafiditra ao anatin'ny 6, 7 ary 8 hatrany ho an'ny fifehezana tanteraka ny ekipa.
HAHAHAHAHAHA dia tiako ny loko mamirapiratra toy izany ao amin'ny terminal, alaivo sary an-tsaina ... 😀
Mahaliana momba ny fork 😉
Hitako fa avy amin'ny tty (xej: crtl + alt + f1) dia miditra ho mpampiasa na root ianao ary miaraka amin'ny vlock - manakana ny tty rehetra izany ary tsy azonao idirana akory ilay session (ctrl + alt + f7) raha izany no izy tsara kokoa noho ny fanakanana ny session.
Mazava ho azy, raha mihazakazaka vlock ianao amin'ny seho sary dia tsy mampidi-doza izany
Tena tsy hitako izay fampiasana azy
ny vokany dia mitovy amin'ny baiko «fivoahana» satria rehefa afaka izany, tb dia mangataka anao hiditra, ary na izany aza afaka miova tty ny tsirairay
inona ny asanao?
Mamaly amin'izay novakiako aho alohan'ny nanodikodiko azy
tena ilaina io, marihiko
Tsy fantatro fa nisy izany, tonga tampoka i tipie ary nianjera, misaotra !! 😀
Alao an-tsaina kely: misokatra miaraka amin'ny mpampiasa ahy aho, tsy misy faka mazava ho azy, te-hanakana fantsona iray izay misy fidirana amin'ny faka, na ohatra te-hanakana fantsona iray izay manana ssh mankany amin'ny milina hafa aho, ny namako te hampiasa ny solosaina hitety fa tsy te-hampandefitra an'io terminal io amin'ny ssh na root aho, satria mampiasa vlock aho, ny iray izay tsy hitany fa mahasoa azy ireo dia ny tsy fananany sary an-tsaina loatra, ha, ny olana dia mipoitra noho ny fahalianantsika, ny fisalasalantsika, fa raha tsy misy izany dia tapaka isika.
Azafady, efa nisy nampiasa azy io tany Ubuntu? .. Manoratra vlock ao amin'ny terminal aho ary rehefa manindry [Enter] hamaha ny terminal aho dia manome ahy lesoka na dia soratako tsara aza ny teny miafina root, sokafy mba hanitsiana izay tsipika voalaza momba ny fikirana na zavatra hafa?
HAHA, PWNED ANAO !!!
Oh !! Ubuntu, Ubuntu ... xD
Fantatrao ve fa ny GENIUSES ao amin'ny Canonical dia nanapa-kevitra taloha ela be fa miaraka amin'ny fampiasa ny fitaovana SUDO dia hadalana ny manana faka manana ny teny miafiny satria amin'izany fomba izany dia "manafoana" vector fanafihana hanohitra azy izy ireo?
Amin'izany no hamoahana ny Ubuntus rehetra miaraka amin'ny kaonty faka TSY MAFANA, izany hoe tsy misy teny miafina.
Amin'ny fanaovana matematika ifotony dia ho tsapanao fa raha miasa miaraka amin'ny root pass i VLOCK fa ny root root OH dia TSY MISY !!! avy eo tsy afaka atao intsony ny miditra amin'ny rafitra XDD
Manana safidy roa ianao: na ampiasao ny fizarana iray hafa izay raisina amin'ny fomba hafa na mamorona teny miafina ho an'ny mpampiasa faka toy ny ankamaroan'ny fizarana izay tsy manafina ny rafitra fototra amin'ny mpampiasa.
[/ kaody [
Vonona, izao ianao dia afaka mampiasa VLOCK na dia mazava ho azy aza, mifanohitra amin'ny volavolan'i Ubuntu io, toa ny manampy repository miaraka amin'ny rindrambaiko nohavaozina sy ny voan-kazo ao amin'i Debian * cof *
xDDD Rehefa nampiasa Ubuntu aho, ny zavatra voalohany nataoko dia ny nanokatra terminal ary nametraka:
Satria raha nampiditra ahy ny mpampiasa ahy, ahoana ny fomba hitondrako ny rafitra misy ahy? xDDD
Salama Servo sy Blink